Trinidad neTobago: Yepamutemo COVID-19 Yekushanya Kugadziridza
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo » Trinidad neTobago: Yepamutemo COVID-19 Yekushanya Kugadziridza
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Health News • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trinidad neTobago Breaking News • Akasiyana Nhau
Iyo Kugara Pamusha Order muTrinidad neTobago inofanirwa kuwedzerwa kwechipiri kunyangwe paine kubudirira muhondo Covid-19 mumavhiki maviri apfuura.
Prime Minister Dr. Keith Rowley akazivisa chinangwa chake chekuwedzera chirongwa ichi zvichitevera rairo yevanachiremba panguva yemusangano wenhau kuDiplomatic Center, St Ann's neMugovera.
Yakatanga kuiswa pakati pehusiku munaKurume 28th, 2020 kubatsira zviremera zvehutano mukunyatso kudzora kupararira kwehutachiona. Yakabva yawedzerwa kwenguva yemazuva gumi nemashanu muna Kubvumbi 15th.
Dr Rowley vakati budiriro yenyika ino yakawanikwa mushure mekunge Hurumende yaunza dzimwe nzira dzakatarisana nenguva kusanganisira kuvharwa kwemiganhu yenyika uye zvikoro zverudzi. Pamusoro pezvo, kutevedzera zviga zvehutsanana zveWorld Health Organisation (WHO )- zvinosanganisira kusapindirana munharaunda zviri kuramba zvichikurudzirwa uye matanho aya anofanirwa kuenderera mberi.
Mukati memavhiki maviri apfuura pave nezviitiko zviviri chete zvakanaka asi huwandu hwakanyanya hwevanhu vakaburitswa muzvipatara.
Anokudzwa Mutungamiriri akati kunyangwe iko kutyisidzira kweCovid-19 kuchiripo, kana Trinidad neTobago dzikaramba dzichienderera mberi nekosi iripo pachave nemhedzisiro. Vakati nemusi wa15 Chivabvu, zvichibva pamamiriro ezvinhu panguva iyoyo uye kuraira kubva kuvanoona nezvehutano nyika inofanirwa kunge iri pachinzvimbo chiri nani "kuvhurazve zvakawanda zvatavhara."
Kubva muna Kubvumbi 25th, 2020, mamwe 1,510 sampuli akaedzwa Covid-19 neCARPHA, 115 vaive nehutachiona, vanhu vasere vakafa uye vamwe makumi mashanu nevashanu vakaburitswa muchipatara.